ကြယ်စင် မင်းထက်'s စာမျက်နာ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
ဘလော့ ပိုစ်များ (41)Discussions (82)အဖွဲ့ များ (12)ဓာတ်ပုံများ (10)Photo Albumsဗီဒီယိုများ (12) ကြယ်စင် မင်းထက်'s Apps
ကြယ်စင် မင်းထက်'s Likes ကြယ်စင် မင်းထက်'s Photos
ကြယ်စင် မင်းထက် တွင် လက်ဆောင် ပေးခံထားခြင်းမရှိသေးပါ။
ကြယ်စင် မင်းထက်'s သူငယ်ချင်းများ
အားလုံးကြည်ရန် ကြယ်စင် မင်းထက်'s ရဲ့ Viedo များ
Forever ( For My Number One) - Wai Lin ft. $i Thu (UG) Added by ကြယ်စင် မင်းထက်0Comments
Aerosmith - I Don't Wanna Miss A Thing (Armageddon) Added by ကြယ်စင် မင်းထက်0Comments
ကြယ်စင် မင်းထက်'s Groups
don't have lover
ပြက္ဒိန်ကြည့်ကြမယ်နော် Visit ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥ သင်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းက ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိမလဲ....ေိခိ♥♥သူငယ်ချင်းများကို ဟိန်းထက်ရဲ့ အိမ်လေးမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်♥♥ မြန်မာချစ်သူ မိသားစုအဖွဲ့ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာလည်ပတ်နိုင်ပါစေ♥♥
မြူနှင်းတွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ....မြန်မာလူမျိုးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင့်သောဆိုဒ်
CSS Codesနည်းပညာကျနော့ကိုဆက်သွယ်နိုင်မည့်လိပ်စာများ........ myanmarchitthu22@gmail.com, kiss3.lay@gmail.com, heartbrokenthu972@gmail.com, moehtetahkar@yahoo.com, moehtetahkar@facebook.com များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်... ကူညီ နိုင်တာကူညီပါ့မယ် facebook user name က Ahkar Htet Myint(မိုးထက်အာကာ) ပါဝထ္တု၊ စာပေများ၊ ဖတ်ချင်သူများအတွက်.... Comment Wall (34 comments)
At 4:50pm on July 5, 2012, ပြည့် စုံ said… MY BEST FRIENDS:
:::: SHARE THIS
SEND ME ONE BACK::::
At 6:34pm on June 18, 2012, ပြည့် စုံ said… လာလည်သွားတယ်နော် သူငယ်ချင်း At 12:44pm on June 12, 2012, fly rose said… အကြာကြီးကိုလာလည်သွားပါတယ်၊ လည်ကိုကောင်းတဲ့အိမ်လေးပါပြန်တောင်မပြန်ချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ပြန်အုံးမယ်နော်...bye........................ At 6:39pm on June 1, 2012, naymyo said… လာလည်တယ် တားလေး... မုန့်ကျွေးးနော်........ At 6:35pm on June 1, 2012, naymyo said… လာလည် သွားတယ် ဘိတ်သားလေး ... နောက် ခါမှ အရက်တိုက်မယ်နော်ခိခိ..... At 12:14am on May 23, 2012, CΔnƉℓɛ said… At 3:46pm on May 18, 2012, Hninyu said… ဟိန်းထက် လာလည်သွားတယ် လက်ဆောင်တော့ပါဝူး..
At 4:19am on May 16, 2012, Yunn Wa Te said… thanks for giving song
At 5:03pm on May 14, 2012, khin may lay said… လာလည်သွားတယ်နော်။။။....
At 7:49pm on May 13, 2012, snowrain@gmail.com said… ကိုကြီးဘ်ိတ်သားရေညီမလေးလည်းလာလယ်သွားပါတယ်
At 10:20am on May 12, 2012, +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ said… ဟိန်းမောင်လေးးးးးးးးသီချင်းလေးတွက် thanks At 8:14pm on May 10, 2012, nanmayhninphyu said… လာလည်သွားပါတယ်
At 10:20am on May 10, 2012, ShiNe & PoE said… At 7:49pm on May 9, 2012,ိDမောင် said… လက်ဆောင်ပေးတဲ့အထွက်...ကျေးဇူးနော်...ညီလေး At 2:49pm on May 9, 2012, Jinne said… Jinne ပါ။ လာလည်သွားပါတယ် ကျန်ကျောင်းရေ....
At 12:51pm on May 9, 2012, cutie said… ကျေးဇူးပါ..ကိုဟိန်းခေါ်ကျန်ကျောင်းကြီး...ဟိဟိ At 11:58am on May 9, 2012, မေမြို့ သူ said… ကျေးကျေးနော် ငယ်လာလည်သွားတယ်နော် At 6:51pm on May 8, 2012, Myat lay said… လာလည်ပါတယ် At 6:09pm on May 8, 2012, naing said… လာလည့်သွားတယ်....ထားဝယ်သားပါ At 1:44pm on May 4, 2012, မောင်မောင် said… ကောင်းတယ်ဂျားအားပေးတယ် မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။
ကြယ်စင် မင်းထက်'s ဘလော့ ပိုစ်
Posted on July 12, 2012 at 1:30pm0Comments
Posted on July 10, 2012 at 3:02pm3Comments
အိမ် မက်ထဲက ကောင်မလေးသို့
Posted on July 6, 2012 at 8:59pm 1 Comment
Posted on June 17, 2012 at 12:09pm 14 Comments
Posted on June 13, 2012 at 8:06pm 1 Comment
Thiha Aung liked ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ကမ္ဘာသစ်ဂြိုဟ်သစ် ရှာဖွေသူများJan 22Thiha Aung commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ကမ္ဘာသစ်ဂြိုဟ်သစ် ရှာဖွေသူများ"စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းသားပဲ"Jan 22Cherrymay liked ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ကျွန်မနှင့် အချစ်ဦးOct 24, 2012eithandartun commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post နင်ငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ"ဒီလိုချစ်သူမျိုးနဲ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်နော်"Oct 14, 2012eithandartun liked ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post နင်ငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲOct 14, 2012eithandartun commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ချစ်သူနဲ့ကြာကြာလက်တွဲနိုင်ဖို့"တကယ်လားဟေ့"Oct 11, 2012eithandartun commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post "ယောက်ျားတွေ အမြင်ကပ်သော မိန်းမ""တကယ်လားဟင်"Oct 7, 2012anneko commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post မိဘ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ ...လက်ဆက်ကမ်းအမွေ..."right"Jul 25, 2012မောင်ရှန်လင်း commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ဒေါသ"ငါလည်းအားပေးသွားတယ်
"Jul 16, 2012Admin♥ white ♥ commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post ဒေါသ"ဖတ်သွားတယ်နော် ဟိန်းမ .. နင်ပြောချင်နေတဲ့ တခုခုကို ငါရလိုက်တယ် ... ကျေးဇူးသယ်ရင်း "Jul 11, 2012julymoe commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post အမေ ကိုချစ်တတ်တဲ့ သယ်ရင်းများအတွက်"အရမ်းကောင်းပါတယ်"Jul 10, 2012sai commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post အမေ ကိုချစ်တတ်တဲ့ သယ်ရင်းများအတွက်"တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ...ရှာဖွေတင်ပြပေးနိုင်တာ...၀မ်းသာပါတယ်...ကျေးဇူးပဲဘိတ်သားရေ"Jul 10, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် commented on လဲ့'s blog post သူ့ဆီက Mail မမြင်ချင်ပါ"ကျေးဇူးတင့်ပါတယ်"Jul 10, 2012fairy angle commented on ကြယ်စင် မင်းထက်'s blog post အိမ် မက်ထဲက ကောင်မလေးသို့"ပြန်လာမှာပေါ့~~~~"Jul 9, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for dolly maung" "Jul 7, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for djthansoe@g mail.com" "Jul 7, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for djminaung" "Jul 7, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for Cynthia" "Jul 7, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for cholaylwin02" "Jul 7, 2012ကြယ်စင် မင်းထက် leftacomment for CHIT OO" "Jul 7, 2012 အားလုံးကြည့်ရန် RSS
7. ရဲရင့် အောင်
13. ♥ white ♥
16. ♥♥♥ကာရန်မဲ့ နှလုံးသား ♥♥♥
20. mr myint
လက်ဆောင်ပေးမယ် CHIT SU
လက်ဆောင်ပေးမယ် Gin Gin Lay
လက်ဆောင်ပေးမယ် hkawng lum
လက်ဆောင်ပေးမယ် hnin wai